In ka yar 15,000 oo ruux oo gudanaya waajbaadka xajka ee sanadkan.”SAWIRRO” | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA In ka yar 15,000 oo ruux oo gudanaya waajbaadka xajka ee...
In ka yar 15,000 oo ruux oo gudanaya waajbaadka xajka ee sanadkan.”SAWIRRO”
illaa iyo 10,000 oo qof ayaa gudanaya waajibaadka xajka sanadkan feejignaanta Coronavirus aawadii, dowladda Sacuudiga ayaa si aad ah uga taxadaraysa faafaha saf-marka ah ee COVID-19 ee dunida sida weyn u wax yeellay.
Wasaaradda Xajka Sacuudiga ayaa mar sii horreysay sheegatay in sanadkan si aad ah loo dhimmay xujeyda gudan laheyd waajibaadka Xajka ee Tiirka 5-aad ee islaamka, ku dhawaad 2 Milyan oo ruux ayaa sanad walba maanta oo kale Baanka Carafa taagnaan jiray.
ha yeesheese dowladda Sacuudiga xujeyda ay oggolaatay in ay gutaan waajiaadka Xajka ee sanadkan ayaa ka imaanaya Sacuudiga iyo dalalka ku xeeran iyadoo xuduudaha loo furay xujeyda ka imaanaysa dalalka khaliijka, isla markaana Xujaydu ay marayso hannaan sahlaya ka hortagga COVID-19 si loo sugo badqabka Xujeyda sida ay shaacisay Wasaaradda Xajka Sacuudiga.
Previous articleTirada dhimashada uu COVID-19 ku dilay Maraykanka oo kor u dhaafaysa 150,000 ruux.
Next articleSii hayaha Ra’iisul wasaaraha oo xariga ka jaray goob karaantiil oo casri ah.
Cameroon: caro ka dhalatay gabar Da’ yar oo loo dilay si arxan darro ah.
Ilhaan Cumar oo guul ka gaartay wajiga 1-aad ee doorashada.